Madaxweyne Farmaajo oo Dalka Dib ugu soo laabtay - Ceelhuur Online
Home > Wararka Maanta > Madaxweyne Farmaajo oo Dalka Dib ugu soo laabtay
March 3, 2018 admin259
Wafdi uu hoggaaminayo Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya mudane Maxamed C/llaahi Farmaajo ayaa maanta Dalka dib ugu soo laabtay,kadib markii uu ka qeybgalay shirkii Madaxda Dalalka Ciidamadoodu ka joogaan Soomaaliya (AMISOM) iyo Dowladda Federaalka Soomaaliya oo ka dhacay 2-dii bishan magaalada Kampala ee Xarinta Dalka Uganda, kaas uu martigeliyey Madaxweynaha Uganda Mudane Yoweri Kaguta Musaveni.
Mudane Maxamed C/llaahi Farmaajo iyo Wafdigiisa Waxaa ku soo dhaweeyey Garoonka Diyaaradaha magaalada Muqdisho, mas’uuliyiin kala duwan oo ka tirsan Dowladda Soomaaliaya.
Madaxweynaha Soomaaliya ayaa khudbad uu kaga hadlayay arrimaha Soomaliya ka jeediayay shirkaasi,isagoo dhanka kale magaalada Kampala ee Xarunta dalka Ugandakulan kula qaatay Madaxweyne Kuxigeenka Koowaad ee Burundi Mudane Gaston Sindimwo oo ka qeyb galayey shirka dalalka ciidamadooda joogaan Soomaaliya (AMISOM).
Shirka uu madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya uu ka qeyb-galay ayaa waxa looga hadlay qodobo ay kamid yihiin ciidamada AMISOM iyo u diyaarinta Ciidamada Dowladda Soomaaliya masuuliyadda Ammaanka dalkooda, waxaana madaxdii shirkaasi ka qeyb-gashay ay bogaadiyeen qorshaha Dowladda Federaalka Soomaaliya ee ku wajahan kala guurka, iyadoo halkaasi ay dowladda Soomaaliya ku soo bandhigtay horumarka ay ka samaysay hagaajinta iyo dib u tayeynta ciidamada Soomaaliyeed.
Sidoo kale Madaxdii shirkaasi ka soo qeyb-gashay ayaa ammaanay dadaalada Dowladda Federaalka Soomaaliya iyo Dowlad Goboleedyad dalka ,iyagoo isku raacay in la xoojiyo kaalmada ciidan ee la siiyo Dowladda Federaalka Soomaaliya si loo xoojiyo dadaalada ay ku xasilinayso Soomaaliya.
Madaxweyne ku xigeenka Galmudug oo socdaal nabadeed ku maraya Waqooyiga Gal-gaduud
Galmudug oo mar kale wajaheysa Xiisad Siyaasadeed.
Xarunta Internetka iyo isku xirka Jamacaddaha dalka oo la daahfuray (Sawirro)
Maqaal: Alshabaab “Colka Waraf ma lagu dayey”